Home Wararka Maanta Maamul goboleedkii 2-aad oo shaaciyey KURAASTA degaan doorashada 2-aad
Dowlad goboleedka HirShabelle ayaa noqotay maamul goboleedkii labaad ee ku dhowaaqa kuraasta deegaan doorashada labaad ee Golaha Shacabka, si loo dhaqan-geliyo heshiiskii doorashooyinka dalka ee horay lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Yaa ku fadhiyey 13-kan kursi?
1-Hop#003 waxaa ku fadhiyey Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene.
2-Hop#006 waxaa ku fadhiyey Maxamuud Cabdullaahi Axmed.
3-Hop#008 waxaa ku fadhiyey Dr Xuseen Cabdi Cilmi.
4-Hop#015 waxaa ku fadhisay Xiis Xasan Aadan.
5-Hop#022 waxaa ku fadhiyey Cusmaan Maxamed Cabdi.
6-Hop#031 waxaa ku fadhiyeyYuusuf Xuseen Axmed (Gama’diid ).
7: Hop#032 waxaa ku fadhiyey Khaliif Cabdi Cumar.
8-Hop#068 waxaa ku fadhisay Faadumo Faarax Ibraahim.
9-Hop#074 waxaa ku fadhiyey Cabdullaahi Colaad Rooble.
10-Hop#086 waxaa ku fadhiyey Faarax Sheekh Cabduqaadir.
11-Hop#109 waxaa ku fadhiyey Cabdifitaax Qaasim Maxamuud.
12-Hop#252 waxaa ku fadhiyey Cabdicasiis Saalax Armaan.
13-Hop#274 waxaa ku fadhiyey Maxamed Cabdullaahi Xasan (Nuux).